Minecraft: maviri emapurojekiti anoshamisa auchada | Linux Vakapindwa muropa
Mitambo yemavhidhiyo yakashanduka nekufamba kwenguva, iine anowedzera simba maginjini enjini uye magiraidhi ayo ari kuwedzera kufanana neichoicho Chimiro chakateverwawo nemutambo AI pachawo, pamwe nemasimba ari kuramba achiitika. Mutambo studio dzinoita mari hombe mukuvandudza zvisingaite nyaya nemazita kushamisa vateveri vavo. Pane kudaro, oddities senge Minecraft inochinja indasitiri pasina chimwe chezvinhu zvataurwa pamusoro.
Mutambo wevhidhiyo weSweden mavambo yakakwanisa kutora nhamba huru yevashandisi kunyangwe iri yakaoma mifananidzo uye yakapusa yekutamba. Nekudaro, zvakaratidza kuti hazvidi kudiwa kwechokwadi uye kufambira mberi kwakanyanya kuziva nzira yekupinda mune ino chikamu chevaraidzo yedigital. Izvi zvinoshandawo kumitambo ye retro, iyo kunyangwe iri yechinyakare, isingambofa yakabuda muchitaera. Nekudaro, Minecraft yakwanisa kuwana mukuoma kunzwisisa nekuda kwemamwe mapurojekiti akamuka akaikomberedza uye kunyangwe chishandiso chikuru chemakirasi.
Iwe unotoziva kuti kambani yeMinecraft yekuvandudza yakatengwa neMicrosoft, uye kunyangwe ivo vachiramba vachichengeta zita rezita reLinux, havasisina kutakura zvitsva yeLinux. Asi izvi hazvireve kuti iwe unogona kuve nenguva dzakakura neichi zvekare.
Zvakare, panguva ino ndichakuratidza mapurojekiti maviri anonakidza izvo zvakandivhundutsa pandakaona zvavanofunga kuita. Uye haasi iwo chete mapurojekiti anotyisa anoshandisa Minecraft sehwaro. Pane imwe nguva ini ndichakuudza zvakawanda. Asi izvi zviviri zvine chinangwa chekudzokorora nzvimbo, nzvimbo dzaunoziva kwazvo.
Planet yepasi: hongu, paunenge uchiverenga ... chirongwa chikuru uye chakakura ichi chinangwa chekushandura pasi rese pa1: 1 chikero kuita mepu hombe yeMinecraft, kudzoreredza zvese zveiyo geology, guta rega rega, nezvimwe. chikero chakazara. Saka iwe unogona kuona nyika sezvairi, asi chimwe chinhu chakapetwa ... Zviripachena kuti zvinotora nguva uye basa rakaoma kuita. Unogona kuona rumwe ruzivo pano.
Chernobyl: chimwe chinhu chakadzika stratospheric kupfuura chiri pamusoro ichi chimwe chirongwa chinomuka chekudzokorora Chernobyl. Iyo nzvimbo inoenderera ichikonzera kunakidzwa kukuru kusvika nhasi, uye yanga iri hwaro hwemimwe mitambo yemavhidhiyo, mabhaisikopo, uye nyaya dzisinganzwisisike. Mushure metsaona panzvimbo yemagetsi yenyukireya, Pripiat akatora chinzvimbo chakakura. Uye ikozvino zvinouyawo kuMinecraft nekuda kwebasa remutambi wemutambo uyu uyo ​​akatsaurira makore maviri ehupenyu hwake kuchirongwa ichi. Mune ino kesi, iye zvakare ane 2% yasara kupedzisa, asi ikozvino zvinokwanisika kuyedza izvo zvawakapedza uye inoratidzika kunge yakanaka kwazvo.
Kana iwe ukashamisika mamapu aya anogadzirwa sei, chokwadi ndechekuti inyaya yenguva, kuzvipira uye zvirongwa zvinokubatsira nazvo sezvishandiso McEdit2 o WorldPainter. Iwe unotsunga kuita imwe here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Minecraft: maviri emapurojekiti anoshamisa auchada